कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि मानिसको शरीरमा के हुन्छ ? – " सुलभ खबर "
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि मानिसको शरीरमा के हुन्छ ?
बीबीसी । नयाँ कोरोनाभाइरसविरुद्धको सङ्घर्ष चिकित्सकहरूका लागि अनिश्चिततातर्फको यात्रा भइरहेको छ। यो भाइरसले शरीरमा कसरी आक्रमण गर्छ ? यसका लक्षणहरू के हुन् ? सबैभन्दा गम्भीर रूपमा बिरामी पर्ने वा ज्यान नै गुमाउन सक्ने जो खि म मा को हुन्छ? यसको उपचार कसरी हुन्छ ?
महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार झेलिरहेको चीनको वुहानस्थित एउटा अस्पतालले यसबारे उत्तर दिन थालेको छ। त्यहाँ उपचार गरिएका सुरुका ९९ बिरामीको विस्तृत समीक्षा लान्सिट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।ती सबै ९९ बिरामीलाई अस्पताल लगिँदा निमोनियाको सङ्क्रमण देखिएको थियो।फोक्सोमा आ क्र म ण
अन्य लक्षण यस्ता थिए
८२ जनालाई ज्वरो आएको थियो ८१ जनालाई रुघाखोकी लागेको थियो ३१ जनाको श्वासप्रश्वासमा समस्या भएको थियो ११ जनालाई मांसपेशी दु:ख्ने समस्या थियो ९ जनामा मिश्रित समस्या देखिएको थियो ८ जनालाई टाउको दु:खेको थियो ५ जनाको घाँटीमा सङ्क्रमण भएको थियो
भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि उनको फो क्सो ले काम गर्न सकेन र उनले सास फेर्न छाडे। अस्पताल भर्ना भएको ११ दिनपछि उनको मृत्यु भयो। अर्का बिरामी ६९ वर्षीय पुरुष थिए। उनलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थियो। उनलाई एउटा कृत्रिम फोक्सोको सहायतामा राखियो। गम्भीर
निमोनिया र शरीरभरि सङ्क्रमण फैलिएपछि रक्तचाप ह्वा त्तै घ ट्यो र उनको मृत्यु भयो।५७ जना अझै अस्पतालमा छन् ३१ जना घर फर्केका छन्११ जनाको मृत्यु भएको छत्यसको अर्थ यस रोगको मृत्युदर ११ प्रतिशत हो भन्ने चाहिँ होइन। अस्पतालमा भएका केहीको अझै ज्यान जान सक्छ भने सामान्य लक्षण देखिएका धेरै मानिस अस्पताल नै नआएका पनि हुन सक्छन्।
काठमाडौँ – जाडोमा कसरी नुहाउने ? यो सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । जाडोमा पानी